Waa maxay celceliska dhaqdhaqaaqa iyo sida lacag looga sameeyo iyaga? | vfxAlert official blog
Celceliska Dhaqdhaqaaqa. Qeybta 1
Ganacsatada maaliyadeed waxay sii kordhayaan ku tiirsanaanta kombiyuutarada, dariiqyada isgaarsiinta degdegga ah iyo algorithms xisaabeed Bilowga ka hor inta aan ka fikirin sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah waa inuu xusuusnaadaa - «all-new is well overloused old» , iyo isticmaalka Moverage Average (MA) wuxuu sii wadaa inuu faa'iido xasiloon u keeno jiilka xiga ee ganacsatada.
Celceliska celceliska dhaqdhaqaaqa waa mid ka mid ah "ugu da'da weyn" aaladaha falanqaynta farsamada ee ay adeegsadaan ganacsatada saamiyada ka hor inta aysan kumbuyuutarradu ku soo muuqan habka gacanta. Hadda waxay ku jirtaa dhammaan meheradaha ganacsiga ee caanka ah. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee go'aamiya dhammaan hantida ganacsiga (lacagaha, saamiyada, mustaqbalka, ikhtiyaarrada).
Xisaabinta iyo Celceliska Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa
Dhaqaaqa Celceliska Suuqyada "buuqa" si loo arko jihada caalamiga ah ee isbeddelka hadda socda. Jaantuska tilmaanta waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay heer firfircoon oo taageero / iska caabin ah. Xisaabintu waxay isticmaashaa wadarta qiimaha hantida ganacsiga muddo taariikhi ah oo la siiyay, tusaale ahaan, 14 maalmood, oo ay ku xigto kala qaybinta tiradooda. Natiijo ahaan, daqiiqad kasta, waxaa jira macno xisaabeed oo sicir bararkii hore oo aan lahayn "buuq".
Xisaabinta waxaa lagu sameyn karaa Qiimaha Furan / Xirid ama Sare / Qiimo Jaban. Barxada tareenada, waxaad ka heli kartaa xulashooyin kale sida Qiimaha Median. Laakiin si ballaaran looma isticmaalo, istiraatiijiyadda inteeda badan Qiimaha dhow ee la isticmaalo.
Kalsoonida calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah waxaa lagu go'aamiyaa tirada muddooyinka la qiyaasay, ma aha oo kaliya iyadoo loo beddelayo jadwalka sare. In badan oo iyaga ka mid ah, ka sii muhiimsan ayaa ah isbeddelka jihada ama jabitaanka MA. Tusaale ahaan, 200-xilli waxay muujineysaa isbeddel muddo-dhex-dhexaad ah markay jabinayso, badiyaa isbeddel buuxa oo isbeddel ah, ama dhaqdhaqaaqa socda ayaa sii socon doona waqti yar.
Jaantusku wuxuu muujinayaa Celcelis Dhaqdhaqaaq Dhaqdhaqaaq leh oo leh algorithm heer sare ah oo qiimo kala duwan leh. Ma jiro farqi weyn oo u dhexeeya jihada dhaqdhaqaaqa isla muddadaas.
Xaaladda aasaasiga ah ee falanqaynta MA: waa in haddii qiimaha uu ka sarreeyo celceliska, uu jiro kor u kac, haddii uu ka hooseeyo - hoos u dhac. Markaad dhinac u dhaqaaqdo, xariiqa ayaa barbar socda qiimaha iyo tilmaamayaasha kanaalka oo dheeri ah ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo furitaanka meheradaha. Waxay sidoo kale lagu dhisi karaa iyada oo ku saleysan Celceliska Dhaqdhaqaaqa.
Marka lagu daro SMA, noocyada soo socda ee tilmaamayaasha ayaa caan ah, kuwaas oo loo tixgeliyo inay yihiin heerar isla markaana ay ku yaalliin inta badan goobaha ganacsiga laba-geesoodka ah :
Jaanqaad (EMA) . Si ka duwan midka fudud, oo aan kala soocin baararka qiimaha la xisaabiyey (xilliyada) oo ku tusinaya inay si isku mid ah muhiim u yihiin, EMA waxay tixgelineysaa xogta ugu dambeysa inay aad muhiim u tahay. Laga soo bilaabo xiritaanka qiimaha hadda, muhiimada ayaa si aad ah hoos ugu dhacaysa laga bilaabo baarka ugu horeeya ee ugu xasaasisan illaa midka ugu dambeeya ee la xisaabiyay, taas oo ficil ahaan aan saameyn ku yeelan go'aaminta isbeddelka.
EMA algorithm wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si dhakhso leh uga jawaab celiso isbeddelada suuqyada si aad uga waxtar badan ugu sameysid waqtiga yar (illaa H1). Istaraatijiyadaha istiraatiijiga ah iyo intraday ee ugu badan ee ku saabsan sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ayaa loo adeegsadaa waa celceliska dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa. Kordhinta xilliyada, xasaasiyadda ayaa hoos u dhacda marka ay gaarto in ka badan 100, ma jiro farqi weyn oo u dhexeeya SMA.
Qiyaasta Miisaaman (LWMA, WMA) . Wax ka beddelka celceliska dhaqdhaqaaqa EMA oo leh algorithm kala duwan oo mudnaan u leh muddooyinka (culeyska). Sidoo kale, baarka ugu dambeeya wuxuu leeyahay culeyska ugu weyn, markaa muhiimada ayaa si aad ah hoos ugu dhacaysa marka loo eego jibbaarada. Waxay ka falcelisaa xitaa isbeddellada qiimaha badan ee fiiqan, sidaa darteed wax badan ayaa loo isticmaalaa suuqa saamiyada, halkaas oo isbeddellada markii horeba loo jilciyey ka soo horjeedka isbeddelka Forex. Waxaa jira istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah , marka lagu daro qadarka muddada, culeysyada la isku hagaajiyo.
Jilicsan (SMMA) Algorithm rogaal celis ah: muddooyinkii la soo dhaafey waxay leeyihiin culeys dheeri ah, oo markaa si isdaba joog ah hoos ugu dhacaya baarka hadda jira. Marka, dhaqdhaqaaqa jaantuska la nadiifiyey wuxuu noqdaa mid iska caabiya isbeddelka qiimaha yar iyada oo aan la kordhin tirada xilliyada. Marar dhif ah ayaa loo isticmaalaa waligiisna waa cunsurka ugu muhiimsan ee lagu gaaro go'aannada ganacsiga.
Kahor inta aynaan sii wadin barashada Celceliska Dhaqdhaqaaqa, aynu fiiro gaar ah u leenahay halbeegga muhiimka ah sida dib u dhigista falcelinta celceliska celceliska dhaqdhaqaaqa ee suuqa hadda jira. Falanqaynta farsamada waxay ku shaqeysaa oo keliya xogta taariikhiga ah, sidaa darteed had iyo jeer waxaa jiri doona dib u dhac, laakiin kiiskan, waxay si weyn u saameyneysaa natiijada. Tani waxay sabab u tahay algorithm jilicsanaanta lafteeda, waxaad kaliya isku dayi kartaa inaad yareyso, laakiin macquul maaha inaad ka takhalusto gebi ahaanba. Had iyo jeer ku xaqiiji xogta tusiyaha qalabka kale, sida oscillators!
Celceliska u guurista ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah
Istaraatiijiyad kasta ama tilmaame kastaa wuxuu leeyahay dejintiisa, laakiin waxaa jira mabaadi'da guud ee sida calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ay u shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya MA dhammaan hantida maaliyadeed:
Soo hel muddada ugu habboon ee MA ee hantida ganacsiga.
Xeerka ugu weyn ayaa ah in la dhimo celceliska dhaqdhaqaaqa xisaabinta marka aan kordhinayno waqtiga. Tani waxay meesha ka saaraysaa jilicsanaanta dheeriga ah ee loo baahan yahay xilliyada yar yar si looga boodo "buuqa" loomana baahna jaantusyada H1 iyo wixii ka sareeya. Intaas waxaa sii dheer, xilliyada gaagaaban tirakoobka ayaa ka wanaagsan EMA, kuwa waayeelka ahna waxaa wanaagsan in aan waqti lagu luminin tijaabooyinka oo la joojiyo SMA fudud.
Hantida kasta waxay u baahan tahay wakhtiyo iyada oo la tixgelinayo astaamaheeda iyo isbeddelka hadda jira, laakiin barta bilow ahaan waxaad kugula talin kartaa isku-darka soo socda ee calaamadaha binary :
34-55-144 waqtiga M1-M15;
8-34-55-89-144 on H1 (saacad);
8-13-21-55-89 ee D1 (maalin);
8-13-21 usbuuc walba iyo wixii ka sareeya.
Tilmaamaha ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin xilliyo muhiim ah oo 100 iyo 200. Waxay tilmaamayaan isbeddellada muddada-dheer; Jebintoodu waxay calaamad u tahay isbeddel dhammaystiran oo suurtagal ah oo isbeddel ah. Sidoo kale waa inaad fiiro gaar ah u leedahay dib-u-tijaabintooda, taas oo ay dhacdo inaad u baahan tahay inaad diyaar u ahaato inaad xirto jagooyinka hadda jira.
Celceliska Dhaqdhaqaaqa waxaa lagu dabaqi karaa oo kaliya shaxda qiimaha laakiin xogta tilmaanta, iyada oo ah cunsur dheeri ah oo loogu talagalay oscillators-ka oo lagu shaqeeyay iyadoo la raacayo habka caadiga ah.
Celcelis ahaan xagal dhaqaaq.
Ujeedada ugu weyn ee tilmaamuhu waa in la muujiyo isku dheelitirka awoodda u dhexeysa iibiyaasha iyo iibsadayaasha. Haddii celceliska celceliska kor loo qaado, iibsadayaashu way ka miisaan culus yihiin oo way sii kordhayaan, haddii kale iibiyayaashu way xukumaan. Jihada jiifka ah waxay xaqiijineysaa xabad joojinta ku meel gaarka ah. Xitaa marka isbeddellada si sax ah loo go'aamiyo, waxaa jiri doonta dhibaato ah in la qiimeeyo xooggeeda, maxaa yeelay rajada heshiiska la furay ayaa ku tiirsan. Waxaa laga yaabaa inay tahay kaliya dhiirigelin muddo gaaban ama saxitaan ah. Muuqaal ahaan, tan waxaa lagu go'aamin karaa xagasha xariiqa la xiriirta dhaqdhaqaaqii hore.
Markay sii weynaato xagasha rabitaanku, ayaa sii xoogaysanaysa suurtagalnimada sare u kaca ama soo noqoshada xigashooyinka. Xaglaha yar yar, ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee loogu talagalay newbie's waxay kugula talineysaa inaad ka booddo calaamadda xitaa haddii ay jirto xaqiijin dheeri ah oo ku saabsan qaabka xad-dhaafka / iibinta. Xagashadee u shaqeysaa hanti gaar ah ayaa kaliya lagu go'aamin karaa si awood leh, laakiin sida habka ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah loogu talagalay 'newbie's' oo si dhakhso leh u qiimeeya suuqa, waa mid lagu kalsoonaan karo, gaar ahaan waqtiyada sare.
Ganacsi iyadoo laga gudbayo Celceliska Dhaqdhaqaaqa.
Fursadaha ikhtiyaari ikhtiyaari ah waxay ka furan yihiin oo keliya meelaha isgoyska celceliska dhaqdhaqaaqa ee leh MAs ama heerar kale oo qiimo leh: Sare / Hoos u dhigma, Fibonacci iyo kuwa kale. Waxaa jira hal sharci oo keliya - kala-soocidda xagga hoose ka soo jeeda waxay ka dhigan tahay iibsasho suurtagal ah, kor-hoos ka iib ah. Dib-u-noqosho fudud iyo bilowga dhaqdhaqaaqa waxay muujinayaan oo keliya isbeddelka isbeddelka, maahan furitaan deg deg ah booska!
Celceliska dhaqdhaqaaqa ayaa ka ganacsan kara burburka iyo dib u soo celinta, gaar ahaan xilliyada "dheer" (100, 200). Xaaladdan oo kale, waa inaad isticmaashaa habab lagu go'aaminayo burburka runta ah, joojinta dabagalka ayaa gacan ka geysan doonta hagaajinta natiijada, taasoo kuu oggolaaneysa inaad gebi ahaanba "xulato isbeddelka" illaa dhammaadka oo aad xirto ikhtiyaarka iyada oo aan khasaaro la'aan bilawga sixitaanka.
Qaybta labaad ee maqaalka, akhri sida loo kordhiyo isku halaynta calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee celceliska celceliska iyo talooyinka loo isticmaalo.